Iji email ọrụ nke smart ekwentị bụ akụkụ nke anyị eme kwa ụbọchị. Ha ịzọpụta oge anyị ma melite ọhụrụ ozi / ozi ịntanetị n'otu ntabi ma mgbe ụfọdụ accidently mgbe anyị nọ ọsọ ma ọ bụ n'ihi na ụfọdụ ndị ọzọ mere anyị ehichapụ anyị mkpa ozi ịntanetị na ọnọdụ ndị dị otú adịghị na-egwu, ndị a Gburu na-adịghị na-adịgide adịgide ehichapụ iPhone na pụrụ ịbụ undelete mfe, ha na-na a ahịhịa nchekwa nke iPhone na i nwere ike undelete ha si n'ebe. Iji undelete gị ehichapụ Gburu on iPhone dị nnọọ mkpa-eso ndị a.
Nzọụkwụ 1. Gaa iPhone Setting> Mail> Gmail Akaụntụ ... N'oge ọ na-ahụ na Archive Ozi na-tụgharịa on.
Cheta na: Mgbe ị tụgharịa na Archived Ozi Njirimara ọ ga-ezitere gị ehichapụ Gburu ka All Mail nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị tụgharịa na nke a mma mgbe ahụ, gị ehichapụ Gburu na ozi ga ịkwaga ahịhịa nchekwa ị ga-aga n'ebe ahụ ozi gị.
Nzọụkwụ 2. Mgbe ahụ na-aga iPhone email ngwa> Mailboxes> Nnabata
Nzọụkwụ 3. Họrọ akaụntụ email maka nke ị chọrọ undelete email. Wee họrọ All Gburu.
Nzọụkwụ 4. Ugbu a, ị ga-enwe ike ịhụ Archive ozi n'ebe ahụ. Ị nwere ike họrọ achọrọ ndepụta na-etinye ya azụ ka chọrọ ọnọdụ.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ gị na-ehichapụ Mail / Ozi na Mkpofu ma ọ bụ All Mail nchekwa mgbe ahụ, ọ pụtara na gị Gburu / ozi e na-adịgide adịgide ehichapụ na ị nwere ike ghara undelete ha na gị iPhone ngwaọrụ.
Olee otú m Play The FLAC Files On My iPhone?
> Resource> iPhone> Olee otú iji undelete iPhone Email